मोबाइल फोनको मानव स्वास्थ्यमा असर – साइन्स इन्फोटेक
जुन 23, 2019 जुन 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments डा. राम बहादुर बोहरा, मोबाइल फोन, स्वास्थ्य
तपाईं साथी खोज्न छोड्नुभयो होला ’cause तपाईको साथी मिनी मोबाइल भएको देखिन्छ । हजुरको सवै जवाफ हजुरको सानो साथीले दिएको छ यसैलाई भन्दछन् मोवाइल फोन र इन्टरनेटको माध्यमबाट हजुरको राम्रो साथी मोबाइल बन्न पुगेको छ भएन त आश्चर्यको कुरा ?
सबैभन्दा रोचक कुरा त सोधेको जस्तोसुकै कुराको जवाफ त्यो सानो साथी मिनी मोबाइल भएको छ । तर इस्टमित्र दाजुभाई दिदीबहिनीलाई मोबाइलको कारणले भुली सक्नुभयो यो नितान्त गलत देखिन थालेको छ । आउनुस् यस्तो कुलतबाट कसरी बच्ने भन्ने’bout जान्ने प्रयत्न गरौं ।
फ्रेवुअरी 22, 2019 फ्रेवुअरी 22, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3